Icandelo lezipapasho ezisemthethweni zika-Apple libizwa ngokuba ligumbi leendaba | Ndisuka mac
Kwiwebhusayithi esemthethweni yeApple sibona utshintsho oluncinci kokubini kubuhle nakumacandelo ahlukeneyo esiza kutsha nje. Kule meko, utshintsho lufikelele kwicandelo lewebhu apho inkampani yaseCupertino ifumene lonke unxibelelwano olusemthethweni lwegama, oko kukuthi, xa besungula i "Namhlanje eApple", iziphumo zenkampani, ukuvulwa kweevenkile zayo ezinje Utyalo mali lwamva nje lwaseDubai okanye lwenkunzi olwenziwe eCorning kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Kweli candelo lewebhu amajelo eendaba angazibona iindaba ngefomathi yokubhaliweyo, ngaphandle kwemifanekiso nayo yonke into elandelwayo kunye namakhonkco kwisicatshulwa. Ukusukela ngoku eli candelo linefomathi entsha efana nebhlog enegama elingu: Igumbi leendaba.
U-Apple akaze abe nzima ngamagamaLe yinto esele siyayazi sonke, kwaye ngoku le nto bayinikelayo kweli candelo lewebhusayithi yeNdlu yeeNdaba, efana ncam naleyo sasinayo ngaphambili kodwa namava aphuculweyo kakhulu.
Ngoku, ukongeza ekusaziseni ngokuhamba kwenkampani, le "bhlog" yeApple ingaphezulu kakhulu ngoku. Kwelinye icala, ngelixa iwebhu ihlaziywa ngokuzenzekelayo kwaye "ngaphandle kwesixwayiso", inkampani yaseCupertino yabeka ifayile ye umhleli weNew York Magazine eUnited States, njengentloko yeApple News. Ewe, le nkonzo ayifumaneki eSpain nakwamanye amazwe amaninzi nokuba. Okwangoku, iindaba ziyaqhubeka nokufika phambi kwe-WWDC apho kuncinci kwaye kuncinci, sinethemba lokuba iApple iyaqhubeka nokongeza ukuphucula kwiwebhu kwaye siyayithanda, kodwa sikwafuna ukubona iindaba ezinomdla kwizixhobo zayo nakulo nyaka kubonakala ngathi yiyo. Le yikhonkco kwicandelo elitsha Iindaba zeendaba ukusuka Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Icandelo lezipapasho ezisemthethweni zika-Apple libizwa ngokuba ligumbi leendaba
Ufakelo olutsha oluhlaziyiweyo lomdlalo weSid Meier Railroads! iyahambelana ngoku kwi-macOS